M & M imisuka lempi
Ungase umangale ukuthi imbangela bathole okuningi kwaba seMpi yoMhlaba yesiBili. Ngokwesibonelo, M & M candies adumile lidumile kokubili abadala kanye nezingane. Zaba i emisha phakathi nekhulu leminyaka eledlule.
Forrest Mars ayikwazanga ukuthola kanye kuyise, yena, ngenhlanhla wayengu- mdali candy-Milky Way, waya eNgilandi, lapho ngo-1932 wavula ekuqhutshweni Mars Amabha amasosha UK. Phakathi Spanish Yombango Mars wathola ukuthi amasosha ukudla ushokoledi zithutha ebiyelwe ushukela igobolondo kanzima. Lokhu dessert inikeza zonke izinzuzo ushokoledi futhi ngenkathi hhayi ngempela gu ukushisa. Ngaleso sikhathi, ushokoledi ukusetshenziswa wawa ngesikhathi sasehlobo ngenxa yokuntuleka Ukupholisa okwanele. Forrest waqaphela ukuthi umkhiqizo ngeke ancibilike ngamazinga ashisa kakhulu, kungaba umcimbi ngempela emakethe. Wabuyela Melika futhi wahlangana Bruce Murray, indodana ka umqondisi wenkampani ushokoledi Hershey anikela ngalo nokubambisana. IMpi Yezwe II yayishuba e-Europe, futhi Mars kwadingeka ukuba nokubambisana, uzomsiza ukuba ubhekane nezingcindezi nokuntula kwezinsiza zokusebenza ezidingekayo. Futhi akalamukelanga - candy laqanjwa ngokuthi i-bofeleba lwamagama abalingani, Mars kanye Murray. Manje kwase kungenzeka ukuqala esikhiqiza engavamile jelly ubhontshisi, okuyinto abawubonanga emakethe US.
I-patent ngoba candy
Ngo-March 1941 Mars wathola igunya lokwenza inqubo yakhe zokukhiqiza futhi baqala ukusebenza e Newark, New Jersey. Ekuqaleni candy edayiswa amakhadibhodi amasilinda futhi zambozwa ensundu, obomvu, osawolintshi, ophuzi, oluhlaza okotshani noma glaze onsomi. Lapho-United States noMbutho ukulwa imisebenzi, candy baqala ukunikeza kuphela ngaphambili, ukuthi kufakwe ekudleni amasosha. Ngesikhathi amasosha sakwazi ukuphindela, sebevele ejwayele amaswidi ezinjalo. Lokhu kwaba yisisekelo ukuthandwa ikusasa ushokoledi dragees ezitolo ezweni lonke.
Impumelelo lonke lelo zwe
Ngokushesha ngemva kweMpi Yezwe II baba atholakale abavamile candy abathengi. Forrest Mars wathenga esigxotsheni kusukela Murray futhi waqala ukuphatha inkampani kuphela. I ajwayelekile iphakethe brown kwahlongozwa ngo-1948 no-1950 ku-candy ngamunye sizobonisa incwadi "M", okuyinto wayedabuka abamnyama, kwathi ngo-1954 baba mhlophe. Candy nge amantongomane, kakhulu, wabonakala ngo-1954, kodwa-ke, lapho yasungulwa nezinhlamvu ukukhangisa. Ngo-1956, i-brand isibe best e-United States. Ngo-1964, Forrest bajoyine ibhizinisi lapho kuvezwa ezihlukahlukene imikhiqizo ephuma kokudla kwezilwane ukuze ilayisi uyise manje, futhi ngokushesha imizamo yabo ngokuhlanganyela sezishiye impumelelo enkulu nakakhulu. Lapho isicelo, iqembu mkhathi lokuqala NASA Forrest amaswidi athunyelwa nge osomkhathi emzileni. Ngemva kweminyaka emithathu, ziye zaba esemthethweni dessert Summer Olympics ngo-1984 e-Los Angeles.
Ngaphezu kwalokho, kuze kube yilolu suku candies M M bayingxenye imenyu nsuku zonke Isosha elithile laseMelika emkhakheni. ukunambitheka Izintandokazi nenduduzo Amazing ukudla lezi candies ukwenza ethandwa kakade amashumi eminyaka ilandelana, futhi akunakwenzeka lokhu kuzoshintsha esikhathini esizayo esiseduze.
Schogetten - chocolate bonke bathanda
Vaz-2131 "Niva" - Isabelomali Auto sezwe
Salting Herring ekhaya
"Bingo" - kuyini? Lona umdlalo ezidumile ithuba, futhi okungaphezu kwalokho?
Yini igama u-Eugene nalokho uhlobo umnikazi walo?
I-Nissan Wingroad: konke okujabulisayo ngemoto yegibeli yaseJapane
Iqhaza abadlali: "Lo Gendarme kanye Extra Terrestrials"
"Ukukhanya" - lokuhlala, Ekaterinburg: indawo, incazelo
Kayak Ukudoba: elula ngokomlando
Indlela ukuxhuma inkinobho ukukhanya
Yini okufanele uyenze uma amapulazi ayedlula-usawoti: amathiphu
Indlela ukuxazulula sudoku yimuphi yinkimbinkimbi
Isipho ngoba usana ekwindla: kufanele uthole?